Ogaden News Agency (ONA) – Xukunkii TPLF oo Dhamaad Kudhaw Iyo Khuburo Kafaalootay Masiirkooda Dambe.
Xukunkii TPLF oo Dhamaad Kudhaw Iyo Khuburo Kafaalootay Masiirkooda Dambe.
Posted by Dulmane	/ July 7, 2016
Xukunkii xaaraanta ahaa ee TPLF oo maraya meel gabagabo ah, Xograsmi ah oo soo gaadhay Wakaalada Wararka Ogadenia ee ONA ayaa muujinaysa in ay xukuumadii TPLF soo afjarayso 25 sano oo ahaa cadaalad daro iyo musuq maasuq ay kawaday qaybaha kala duwan ee wadanka.
Amanuel Biedemariam oo ah qoraa wayn ayaa sheegay in uu xukunkii TPLF kusii daba dhamaanayo god madow oo aan laga soo laaban karin, sida uu Amanuel Biedemariam qormadiisa ku sheegay kooxda TPLF ayaa ku fashilantay xukunkii cadaalad darada ahaa ee ku salaysnaa u xaglinta qabiilka Tigree ee daga woqooyiga wadanka Itoobiya oo si xoog ah mudo 25 sano ah kuhaystay talada wadanka.
Sida uu qoraagu sheegayo kooxda TPLF ayaa hada doonaysa in ay qabiilka Tigray u helaan xuquuqda uu qawmiyadaha siinayo Qodobka 39aad ee dastuurka Itoobiya, qodobkan magac uyaalka ah ayaa qaba in qawmiyadii kuqanci wayda lanoolaanshaha Itoobiya ay ka gu’i karto hase yeeshee qodobkan ayaa ah mid meesha iskaga qoran waxaana laga hor istaagay bulshada Somalida Ogadenia oo mudo dheer doonaysay in ladhaqan galiyo qodobkan.
Sida uu qoraagu xusayo dhamaan qawmiyadaha ayaa baahi uqaba dabaqida Qodobka 39aad balse kooxda TPLF ayaa hada doonaysa in ay uga faa’iideeyaan qabiilka tirada yar ee Tigree. Amanuel Biedemariam ayaa sidoo kale xusay in ay kooxda TPLF kufashilantay xakamaynta mudaharaadada iyo kacdoonka shacbka ee kajira Ogadenia, Oromia, Xabashida iyo qawmiyado kaloo kasoo horjeedsaday xukunka lagu daalay ee TPLF.
Qoraaga oo maqaal aad u dheer kaqoray kaladaadasha TPLF ayaa sooqaatay in ay xukuumada TPLF burbur qarka usaaran tahay haday dagaal lagasho dowlada Eritrea wuxuuna sheegay in siwayn loorumaysan yahay in ay Itoobiya burburayso hadayna joojinin daandaansiga ay kuwado wadanka dariska ah ee Eritrea.
Sidoo kale waxaa arimaha qasan ee Itoobiya walaac kamuujiyay qaar kamid ah beesha caalamka gaar ahaan kuwa ree galbeedka waxayna qaarkood shaki galiyeen dhaqaalaha lasiiyo Itoobiya oo aan ku bixin meeshii loogu talogalay.
Sida aan horaan idiinku soo tabinayba kooxda TPLF ayaa kujirta kala alaab uruursi iyadoo ninba wixii gacanta ugu dhaco uu qaadanayo, sida aan qormadanadii hore idiinku cadaynayba saraakiisha ugu saraysa TPLF ayaa deegaano karaadsanaya wadamada dibada gaar ahaan kuwa ree galbeedka waxayna saraakiishu wadanadaas gaysteen hanti badan oo dadka shacabka ah laga dhacay.
Xubnaha aan idiin cadaynay in ay wadamo kale hanti gaysteen waxaa kamid ahaa ninka horjoogaha ka ah Gobolka Tigree oo hanti badan gaystay wadanka Austaralia iyo haweenaydii Malis Zinawi oo wadanka maraykanka gaysatay hanti badan iyo ciyaalkeediiba iyo waliba xubno kaloo magac kulahaa kooxda TPLF.
Sikastaba ha ahaatee dadka siyaasada Itoobiya ka faalooda ayaan wax shaki ah galinaynin burburka xukunka TPLF waxayna sheegayaan in uu soo afjarmay xukunkii ugu cadaalada xumaa ee abid soomara wadanka Itoobiya waxayna Xeel dheerayaashu saadaalinayaan kala yaaca qoomiyadihii xoog lagu haystay.